Nleta Hultsfred | Na Hultsfred enwere ohere maka ndụ!
Enwere ohere ebe a maka ndụ
Nweta ndụmọdụ gbasara ihe omume na ahụmihe
Kungsfiskaren n'oge ememme Hultsfred
Chọpụta Hultsfred na Vimmerby 22 Mee
More n'ike mmụọ nsọ
Echefula ihe ọ bụla na-eme na obodo Hultsfred.
2022-05-20	20 Mee, 2022
Hultsfred etiti	Bryggerigatan, Hultsfred
Previousbọchị gara aga
Muselọ ihe ngosi nka na-atọ ụtọ, mmemme ezinụlọ na-eme enyi, nlegharị anya na ọdịdị dị egwu. Choputa Hultfred niile!
Stensryd bu ebe edere na oke ohia dika oke ohia na aru ulo. The idobere mejupụtara dabere Hällmark fir pine, emeghe ogbenye marshes, apiti ọhịa na pine opitoropi. Ohia enweghi otutu ma nwee
Melsjön bụ obere ọdọ mmiri na-emighị emi na mmiri ahụ bụ ndọtị nke Gårdvedaån. Ọ dị n'ebe ugwu nke Ọdọ Mmiri Flaten n'ebe ọdịda anyanwụ nke Målilla na
Ajịrịja nkume n'ugwu ugwu
Na Silverdalen ị ga-ahụ ugwu ajịrịja nkume. Nyocha
Granite Ball na Slättemossa
Na Kraskögle, enweghi oke ohia nye ọgbọ niile. Ala ahụ bụ ebe agbaze agba akwụkwọ ice. Oke ohia nke udiri udiri a na udiri ihe di iche
Kaffeberget dị na etiti obodo na ndịda Virserum. Mpaghara ịsa ahụ nwere ugwu na aja na ahịhịa. E nwere ihe abụọ jetties, na-agbanwe ụlọ, swings na
Hultsfreds Bowlinghall nwere ngụkọta nke usoro ọmụmụ 8 maka egwuregwu abụọ na egwuregwu. Childrenmụaka nwere fences a na-akpọ. bumpers ka apiajiri n'elu akuku nke uzo
Nlegharị anya & omume
Na -eju anya na akụkọ ihe mere eme, nka & nka, anụ ọhịa, ọdịdị mara mma na ọtụtụ ndị ọzọ. Enwere ọtụtụ mmemme na ebe nlegharị anya ebe a, ọtụtụ n'ime ha na -emeghe n'afọ niile!
Hembygdsgården nwere ebe mara mma nwere mmiri iyi na mmiri ọdọ mmiri. Obodo etiti obodo bara nnukwu uru maka Venabygden nwere ọtụtụ ụlọ bara nnukwu uru
All nlegharị anya & eme
Hụ ebe nile ịsa ahụ
Hụ ụzọ ụkwụ njem niile
Hụ ọkwa niile na ogige ndị ọzọ
A nicer nri abalị usọrọ, nri ehihie na obodo ma ọ bụ a mma mgbede na ndị enyi. Onwere ihe diri ihe uto na oge.
Lavida Coffee dị n'etiti Hultsfred. N'ime ụlọ sara mbara ma dị ụtọ, ị nwere ike ịzụta ihe niile site na achịcha na achịcha achịcha na nri nri ehihie. Ekele gị
Milano bụ pizzeria nwere ụzọ nnabata na ohere iri nri na saịtị. A na-enye Pizza, kebabs, falafel, burgers na salads dị iche iche ebe a.
🏨 Hotel, 🎺 Egwu, Ụlọ oriri na ọṅụṅụ
"Ezigbo nri na akọnuche dị ọcha, kwụ ọtọ site na ugbo". N'ebe a, ị nwere ike ịtụ anụ na mpaghara ka emepụta anụ. Gaa na ma ọ bụ ezumike ma biri n'ubi anụ arụ, zute
Pizzeria na Hultsfred nke dị n’akụkụ Willys. A na-enye Pizza, kebabs, gyros, salads na burgers ebe a. Ọ na-enye ezigbo pizzas, ndị ọrụ enyi na enyi
O nweghi ihe o mere ma oburu na inwere anya gi dozie izu uka izu uka, ezumike ezin’ulo ma obu nzuko - enwere udiri ulo nke kwesiri ka emee.
Ebe mara mma dị na mpaghara nchekwa ihe okike na azụ azụ Stora Hammarsjön dị na mpụga Hultsfred bụ ebe nchekwa ihe okike Stora Hammarsjön na ebe nchekwa azụ. Na Stora Hammarsjön, ihe dị ka kilomita iri, e nwere nke ka mfe
Ndị nyocha 2022 Amy Winehouse Kungsfiskaren n'oge ememme Hultsfred Chọpụta Hultsfred na Vimmerby 22 Mee
Ndị nyocha 2022 Amy Winehouse Kungsfiskaren n'oge ememme Hultsfred Chọpụta Hultsfred na Vimmerby 22 Mee Ducks - ndị dike ọla edo anyị!